Awoodda Suuqgeynta Xogta ... Digniin | Martech Zone
Daabacaaddan iyo inta badan shaqada aan u qabanno macaamiisha waxay ku lug leedahay waxyaabo muuqaal ah. Waxay u shaqeysaa… dhagaystayaasheena ayaa si weyn u koray iyada oo diirada la saarayo waxyaabaha muuqaalka ah waxaan sidoo kale ka caawinnay macaamiisheenna inay kor u qaadaan gaadhitaankooda iyagoo leh muuqaal muuqaal ah qayb ka mid ah isku dhafka.
Tan waxaa ku jira ah infographic in Suuqa Xukunka Suuqa loo abuuray si loo soo bandhigo awoodda nuxurka muuqaalka ah. Ma aha wax qarsoodi ah in macaamiisha ay si fiican uga jawaabaan suuqgeynta muuqaalka ah, waana tan mid ka mid ah sababaha ay shaxdu u noqotay qaab caan ah oo wax ku ool ah suuqgeynta internetka. Waxay kuu oggolaanayaan inaad ku soo bandhigto macluumaadka hab dhagaystayaashaadu dhab ahaantii u nuugi doonaan farriintaada, halkii aad ka dul mari lahayd qoraallada oo kaliya aad hayn lahayd boqolkiiba in yar oo macluumaadka ah.
Digniinta Tusmada Muuqaalka
Qaybaha muuqaalka ah ee muuqaalka ah sida sawir-qaadista ayaa muhiim u ah an istiraatiijiyad wax ku ool ah laakiin waa kaliya haddii lagu soo bandhigo barxad la habeeyay oo ka caawisa wadista kaqeybgal qoto dheer iyo fursado isbadal. Maxaan uga jeedaa
Miyuu qoraalka la xiriira ku filan yahay inaad ka caawin doonto waxyaabahaaga muuqaalka ah inay noqdaan ay kuxiran yihiin matoorada raadinta? Waxaad ogaan doontaa inaan marwalba ku duubno faahfaahintayada qaab qoraal ah macluumaad xambaarsan. Taasi waa si makiinadaha raadinta aysan u arkin bogga inuu yahay mid fudud oo ka kooban waxyaabaha la iska indho tiray darajadooda. In kasta oo macluumaadka loo yaqaan 'infographics' ay inta badan leeyihiin tanno ah, Google ma muujinayo waxyaabaha ku jira sanduuqa macluumaadka, waxay eegaan waxyaabaha ku hareeraysan. Matt Cutts xitaa wuxuu ka digay labo sano ka hor xiriirinta iyo caannimada infographics-ka ayaa laga dhimi karaa matoorada raadinta (IMO, taasi waxay noqon laheyd doqon waxaana ka shakisanahay inay waligeed dhici doonto).
Ma jiraa a wac talaabo ku saabsan infographic ah? Kuma filna kaliya inaad aqriso faahfaahinta macluumaadka oo aad aragto astaanta cidda sameysay, istiraatiijiyad noocee ah ayaad u leedahay inaad u qaaddo akhristaha tallaabada xigta ee nidaamka iibsiga? Waxaan badiyaa sii deynaa faahfaahinta si aan kor ugu qaadno waxyaabaha qotada dheer sida joornaalada ama in aan ku dhiirrigelino nooc ka mid ah diiwaangelinta dib u soo celinta goobta macaamiisha.
Ma jiraa a bogga soo degitaanka oo leh dalab in CTA baabuurta u kaxayn doonto? Ma jiraa foomka rukunka si aad ugu aqriso akhristayaasha email ama warside? Ma jiraan qoraalo kale oo laxiriira ama qoraallo shax ah oo lagu wadaago bogga soo degida si aad akhristaha ugu sii wadi karto qoto dheer?
Sidee tahay cabirka saameynta waxyaabaha muuqaalka ah ee la wadaagayo? Kuma mashquulinno koobi oo dhaji qoraalkan sanduuqa ka hooseeya infographic-ka ee isku dayaya inuu qasbo gadaal gadaal. Iyada oo leh CTA-gaaga ku yaal bogga 'infographic', waxaan inta badan isticmaalnaa isku-xireha gaabin sida Bit.ly oo naga caawiya inaan cabirno dhaqdhaqaaqa tooska ah ee ay soo saarto infographic
Sidee iyo goormaad tahay kor u qaadista macluumaadka? Waxaan u qaybineynaa faahfaahinteena macluumaadka macaamiisheena qaab muuqaal ah oo PDF ah oo waxtar u leh Slideshare iyo waxaan kor u qaadeynaa macluumaadka dhammaan kanaallada bulshada ee macaamiisha, marinnadayada bulsheed, iyo had iyo jeer shirkadda xiriirka dadweynaha ee macmiilku waxay ku dhejineysaa faahfaahinta bogagga ku habboon. Abuuritaanka macluumaadka muuqaalka kuma filna, waa inaad leedahay istiraatiijiyad dhiirrigelin ah. Waanuna kor u qaadi doonnaa marar badan… ma aha oo keliya hal olole.
Faahfaahintan ayaa sharraxaysa sababta nuxurka muuqaalku u yahay mid waxtar leh, soo jiidasho leh, oo qancin kara. Waxay ka hadlaysaa guusha istiraatiijiyadda macluumaadka iyo sababta ay meheraddaadu u tixgelinayso suuqgeynta macluumaadka. Suuqgeynta Infographic waa xeelad cabsi leh oo soo jiidasho leh, laakiin waa inaad leedahay istiraatiijiyad la xiriirta haysashada iyo beddelashada taraafikada aad soo jiidanayso!
Tags: DK New Mediasuuq geynta macluumaadkadhiirigelinta infographicistaraatijiyad infographicnaqshadeynta macluumaadkawarbaahinta xukuma suuqaMacluumaadka Suuqgeyntatusmada muuqaalka